hypertensive संकट मान्छे कुनै पनि उमेर मा सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ देखि, त्यसैले सबैले उच्च दबाव मा पहिलो सहायता आवश्यक छ के थाहा हुनुपर्छ। यो अवस्था पुरानो उच्च रक्तचाप (लगातार उच्च ग्रस्त गर्नेहरूलाई मा उत्पन्न गर्न सक्छ रक्तचाप)। तर उहाँलाई र थकान वा पर्याप्त तनाव पछि साधारण मान्छे संग सामना गर्नुपरेको थियो।
रोग को लक्षण
नियम, एक दबाव वृद्धि संकेत गरिब स्वास्थ्य। तर व्यक्ति अन्ततः भने समस्या पहिलो पटक सामना भने, उहाँले बिरामी भए किन कारण बुझ्न सक्दैन। के भयो सामना गर्न, यो तपाईं लक्षण सँगसँगै छन् के थाहा छ भने, सम्भव छ उच्च रक्तचाप। के गर्न (पहिलो सहायता समयमा प्रदान गर्नुपर्छ), सबैले समय बिरामीको अवस्था पत्र गर्न भनेर थाहा हुनुपर्छ।
उच्च रक्तचाप को लक्षण समावेश:
- वाकवाकी को उद्भव, उल्टी;
- मेरो मन्दिर मा धडकता;
- हृदय को क्षेत्र मा बेचैनी;
- आँखाको darkening;
- छिटो धडकन;
; कमजोरी को उपस्थिति -
- चरम मा numbness;
- टाउको गर्न रगतको एक भीड महसुस।
तर यी लक्षण सबै तिनीहरूले पुष्टि गर्न सक्छन् र अन्य उल्लंघन, नातेदार हुन्। त्यसैले, तपाईं पहिलो सहायता प्रदान गर्न सुरु गर्नु अघि, यो मनमोहक दबाब मापन गर्न छ।
आवश्यक कार्य रणनीति
सोचिरहनुभएको पहिलो घरमा उच्च दबाव मा सहायता कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ अघि, यसलाई मापन गर्न एक तरिका पत्ता लगाउन आवश्यक छ। सबैलाई tonometer हुनेछ यदि यो सबै भन्दा राम्रो छ। यो रूपमा सरल वा यांत्रिक हुन सक्छ। को मापन दबाव सम्भव छैन भने, यो तुरुन्तै एक एम्बुलेन्स कल गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। दबाब सामान्य भन्दा उच्च छ भने एउटै, गर्नुपर्छ। चासो 140/90 मिमी Hg को स्तरमा दर मा वृद्धि लगाउनुपर्छ। कला।
डाक्टर को आगमन सम्म यो उहाँको लागि एउटा सहज स्थिति रोगी राख्न आवश्यक छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प - आधा-बैठक। सबै वस्त्र unbuttoned वा हटाइएको squeezing हुनुपर्छ। तपाईं पनि त्यहाँ यस्तो व्यक्ति, आगमन ताजा हावा जहाँ कोठा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अलिकति तातो पानी संग खुट्टा स्नान प्रयोग गरेर अवस्था कम। तपाईं टाउको को बाह्य गर्न रगत प्रवाह प्रदान गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई उच्च दबाव मा सबैलाई पहिलो सहायता उपलब्ध छ। एक मानिस पहिलो यस्तो समस्या सामना भने, यो डाक्टर को आगमन लागि प्रतीक्षा गर्न र आफ्नो कुनै पनि औषधि पिउन छैन राम्रो छ।
पुरानो उच्च रक्तचाप भोगिरहेका मान्छे, हरेक स्वास्थ्य गिरावट मा एक एम्बुलेन्स बोलाउन हुनेछ। तिनीहरूले सधैं छोटो समयमा दबाब पत्र गर्न सक्ने लागूपदार्थ फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यसलाई "Corinfar", "Fiziotenz", "Capoten", "Clonidine", "Tonorma" जस्ता हालतमा हुन सक्छ। तर आत्म-medicate र दबाइहरु चयन एक्लो यो लायक छ। मात्र एक डाक्टर रोगी गरेको उमेर, को हृदय प्रणाली र इतिहास को आफ्नो राज्य मा आधारित सबै भन्दा उपयुक्त दबाइ चयन गर्न सक्नुहुन्छ। पनि एक विशेषज्ञ dosages चयन ट्याब्लेटको पिउन गर्नुपर्छ के मा बताउन सक्छ।
उच्च रक्तचाप लागि पहिलो सहायता तुरुन्तै प्रदान गर्नुपर्छ। तर यो कि तत्काल प्रभाव भर बुझ्न आवश्यक छ यो मूल्य छैन। सामान्यतया, दबाइ 30 मिनेट पछि भन्दा पहिले कार्य गर्न थाल्छ।
को प्रभावकारिता को मूल्यांकन
उच्च रक्तचाप देखि ग्रस्त मान्छे को लागि दबाव को एक तेज जम्प संग, यो असाधारण खुराक लिन आवश्यक छ। केही गल्ती यसलाई प्रभाव थप तेजी आयो गर्न दुई पल्ट औषधिको खुराक पिउन राम्रो छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले उच्च दबाव मा यस्तो पहिलो सहायता अझ प्रभावकारी हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर डाक्टर categorically यो गर्न निषेध गरेका छन्। दबाब पनि तेज एक कमी मस्तिष्क परिसंचरण को विकारहरु पैदा गर्न सक्छ। नतिजा अपरिवर्तनीय हुन सक्छ।
यसरी यो प्रदर्शन परिवर्तन गर्नुपर्छ कसरी थाहा आवश्यक छ। यो दबाव द्वारा 30 भन्दा बढी मिमी Hg गिरा छ कि असम्भव छ। कला। आधा एक घण्टा। घडी मा 60 भन्दा बढी मिमी Hg द्वारा कम हुँदैन। कला।
पहिलो सहायता प्रभावकारी उच्च दबाव थियो कि आकलन गर्न, यो केवल एक tonometer हुन सक्छ। को घण्टाको भने, दबाब 40 मिमी Hg सम्म कम भएको थियो। कला। त्यसपछि थप रकम पिउन सक्दैन। मात्र अपवाद psycho-भावनात्मक राज्य पत्र गर्न सक्ने sedatives छन्।
परम्परागत चिकित्सा व्यञ्जनहरु को प्रयोग
केही चक्की प्रयोग कम गर्ने प्रयास र चिकित्सकहरु सिफारिस कि विधिहरू रुचाउँछु। तसर्थ, यो पनि डाक्टर द्वारा सिफारिस गरिएका पारंपरिक विधिहरू प्रयोग गर्न सम्भव छ। यी रोगी र तातो खुट्टा स्नान गर्न पूर्ण आराम को प्रावधान समावेश गर्नुहोस्।
तर चिकित्सकहरु यस्तो विधिहरू सीमित छैन। दबाव surges केही जामुन Viburnum chewed लागि तिनीहरूले सिफारिश गरिन्छ। तिनीहरूले पनि मद्दत गर्छ तर्क ऐंसेलु पात बाट चिया। तिनीहरूले बनाउँने र सट्टा दिन सामान्य चिया भर पिउन गर्न आवश्यक छ।
एक उच्च दबाव एक आलु प्रयोग कसरी पहिलो सहायता केही बताउन प्रदान गर्न सकिन्छ। यो उद्देश्य लागि यो अंगीठी र कपडा मा र्याप गर्न आवश्यक छ। यस मन्दिर लागू compresses चाँडै अवस्था कम गर्न सक्षम छन्।
उच्च रक्तचाप भोगिरहेका मान्छे, उनीहरूले उच्च दबाव मा पहिलो सहायता प्रदान गर्न कसरी सिक्न आवश्यक छैन भनेर कार्य गर्न, आवश्यक कसरी बुझ्न आवश्यक छ। डाक्टर द्वारा निर्धारित चक्की, तिनीहरूले नियमित पिउन गर्न आवश्यक छ। तर पनि यो सधैं मदत गर्न सक्षम छ।
मान्छे उच्च रक्तचाप भोगिरहेका, गर्नुपर्छ:
- नुन र यो एक उच्च सामग्री संग खाद्य पदार्थ को खपत गर्न;
- फैटी र तला खाद्य पदार्थ को आहार बाट निकाल्न;
- आफ्नो वजन (मोटे मान्छे दबाव समस्या विकास गर्न थप सम्भावना) निगरानी गर्न;
- प्रदर्शन सरल दैनिक व्यायाम;
- भावनात्मक अधिभार जोगिन।
यी नियमहरू अनुपालन एक hypertensive संकट विकास को likelihood कम र रक्तचाप घटेको कम हुनेछ।
छोराछोरीको छाला रोग कसरी
Sarcoma - एक वाक्य? कसरी रोग सामना गर्न?
कसरी rhinitis को उपचार
Gubanov लियोनिद Ivanovich: भूमिका, चलचित्र, जीवनी
पनीर, मेयोनेज, मासु र लसुन संग ओवन मा पाकेका आलु
2020 - कुन जनावर चिनियाँ Horoscope मा?
घरमा रूपमा ज्याकेट धुन? सुझाव
कीमा बनाएको मासु Patties: व्यञ्जनहरु को एक विशाल चयन